बाबुरामको प्रश्न : मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाम् ? - Baikalpikkhabar
बाबुरामको प्रश्न : मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाम् ?
काठमाडाैं / जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टीका महन्थ-राजेन्द्र पक्ष सरकारमा गएको भन्दै मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाम् ? भनी प्रश्न गरेका छन्।
आज मात्रै जसपाको महन्थ-राजेन्द्र समूह ओली सरकारमा सहभागी भएका छन्। महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकास मन्त्री भएका छन्। सबै मन्त्रीले शपथसमेत लिइसकेका छन्।
यसै प्रसंगप्रति कटाक्ष गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहॉ जोडिएको रहेछ? दुवैको मुकुण्डो उत्रिएन त? पेचिलो प्रश्न पनि गरेका छन्।
ट्विटमार्फत ४ प्रश्न तेर्‍स्याएका उनले पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादका कुरा गर्ने ट्विटमार्फत कटाक्ष पनि गरेका छन्। उनले संविधान जारी हुॅदा दीपावली गर्ने र ब्ल्याकआउट गर्नेको घॉटी कसरी जोडियो भनी पनि प्रश्न गरेका छन्।
शनिबार, २२ जेठ, २०७८, बिहानको ०८:२४ बजे